merolagani - प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ७१५ रहेको कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी साढे २ रुपैयाँ !
शेयर बजार घटेर ११४० बिन्दुमा आएपनि थोरै कमाइ गर्ने कतिपय यस्ता कम्पनीहरुको शेयरमूल्य भने विविध कारणले अहिले पनि उच्च छ। कम्पनीले गर्ने कमाइको आधारमा मूल्य निर्धारण भन्दा माग र आपूर्तिलाई हतियार बनाउँदै कारोबारीको चलखेलका कारण पनि यस्ता कम्पनीहरुको मूल्य बढ्ने गरेको छ ।
सिद्धान्तत मूल्य आम्दानी अनुपात २० गुणा रहेको कम्पनी लगानीका लागि उपयुक्त हुने बताइन्छ । सर्पोट मात्र हैन नेपालका प्राय सबै लघुवित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी कम भएका कारण आम्दानीको तुलनामा शेयरमूल्य निकै उच्च छ । जसले लघुवित्त कम्पनीहरुमा लगानी गर्न पनि उत्तिकै जोखिम देखिन्छ ।
यस्तो छ माईक्रोफाइनान्सको दोस्रो त्रैमास
सपोर्ट माईक्रोफाइनान्स (SMB) को धितोपत्र माघ २४ गते बिहीबार दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ७१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। दोस्रो त्रैमासिक रिर्पोट अनुसार कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी भने वार्षिक दुई रुपैयाँ ४० पैसा मात्र छ। कम्पनीको शेयरमूल्य र आम्दानीको अनुपात गणना गर्ने हो भने २९७ .९२ गुणाको खाडल देखिन्छ।
चुक्ता पूँजी ६ करोड रुपैयाँ रहेको सर्पोट माईक्रोफाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा ७ लाख रुपैयाँ १८ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा माईक्रोफाइनान्सले ६८ प्रतिशतले नाफा बढाएको हो । गत आवको यसै अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा ४ लाख २७ हजार मात्र रहेको थियो ।
कम्पनीको जगेडा कोषको आकार पनि कमजोर छ। माईक्रोफाइनन्सको जगेडा कोषमा ४१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ सञ्चित छ । गत आवको १६ लाख ७२ हजार रहेको जगेडा कोष पनि कम्पनीले १४९ प्रतिशत अर्थात दुई लाख ९१ हजारले बढाएर पुर्याएको हो ।
पुस मसान्तसम्ममा १० करोड १९ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन तथा ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सापटी गरेर ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । यसबाट कम्पनीले एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । यो गतवर्षको तुलनामा ३१ लाख रुपैयाँ धेरै हो ।
समीक्षा अवधिमा माइक्रोफाइनान्समा खराब कर्जाको अनुपात बढेको देखिन्छ । गत वर्षको यसै अवधिमा १.५३ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा अनुपात बढेर चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा ३.५३ प्रतिशत पुगेको छ ।
माईक्रोफाइनान्सको वार्षिक प्रतिशेयर आम्दानी २ रुपैयाँ ४० पेसा र प्रतिशेयर नेटवर्थ ११० रुपैयाँ ४८ पैसा छ ।
रिर्पोट विश्वास गर्नै गाह्रो
नियामक निकाय नहुने कम्पनीहरुले मात्र विश्वास गर्न गाह्रो हुने वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । यसले कम्पनीका अन्य सहि विवरणमा पनि आशंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर सपोर्टको हकमा भने नियामक निकाय हुँदा हुँदै पनि यस्तो वित्तीय विबरण सार्वजनिक भएको हो ।
सर्पोट माईक्रोफाइनान्सले नै प्रकाशित गरेको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिको वित्तीय विवरणको प्रमुख वित्तीय अनुपातमा मूल्य आम्दानी ५३५ गुणा बढी देखाएको छ । जुन उसैले प्रकाशित गरेको विवरणले पुष्टि गर्न सक्दैन ।
वित्तीय विवरणको बुँदा ४ को 'ख' मा माइक्रोफाइनान्सको यस त्रैमासमा कारोबार भएको शेयरमूल्य उल्लेख गरेको छ । जसमा अधिकतम प्रतिकित्ता ८०३ र न्यूनतम ५६२ रुपैयाँमा यस त्रैमासमा कारोबार भएको उल्लेख छ ।
अधिकतम शेयरमूल्य ८०३ रुपैयाँलाई आधार मान्दा पनि माइक्रोफाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात ३३४.५८ गुणा मात्र बढी देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ कम्पनीले कसरी ५३५ गुणा उल्लेख गर्यो । कम्पनीको आम्दानी अनुपात ५३५ गुणा मूल्य आम्दानी हुनका लागि कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता १२८४ रुपैयाँमा कारोबार भएको हुनुपर्छ ।
यसअघि नयाँ नेपाल लघुवित्तले प्रकाशित गरेको चालू आवको दोस्रो वित्तीय विवरणमा पनि मूल्य आम्दानी अनुपातमा पनि यस्तै गडबढी देखिएको थियो ।
दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन एकैपटक धेरै कम्पनीहरुले प्रकाशित गर्ने र कम्पनीहरुका यस्तै गडबढीका कारण आम लगानीकर्ता मात्र यस क्षेत्रमा काम गर्ने आर्थिक पत्रकारहरुबाट पनि कतिपय अवस्थामा लगानीकर्तालाई गलत सूचना प्रवाह हुने गरको छ ।
नेपाल एग्रोको नाफालाई ‘राइट ब्याक’ को टेवा
खुद ब्याज आम्दानी र अन्य सञ्चालन आम्दानी बढेपछि मिर्मिरेको नाफा बढ्यो
Jan 24, 2021 08:47 AM
लक्ष्मी लघुवित्तको अधिकांश सूचकमा सुधार
Jan 24, 2021 05:55 AM
बिभाजित नेकपाका दुबै समूहले बैंकले रोक्का गरेको खाता खोल्न कर्मचारीलाई दबाब दिँदै
Jan 24, 2021 06:15 PM
बिभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुबै समूहले बैंकले रोक्का राखेको खाता खोल्न बैंकका कर्मचारीलाई दबाब दिन थालेका छन् ।
आइतबार ४,४१३ पीसीआर परीक्षणमध्ये २७० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, निधन हुनेकाे कुल संख्या २००१ पुग्याे
Jan 24, 2021 05:47 PM
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाः लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च भएन, बजेट कार्यान्वयनमा यस्ता छन् चुनौती
मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना के हाे ? नेप्सेले एनसिसि बैंकसँग सोध्यो स्पष्टीकरण
Jan 24, 2021 04:51 PM
छ महिनामा बीमा कम्पनीहरुको बीमाशुल्क ७८ अर्ब माथि, कुनको कति ?
Jan 24, 2021 03:50 PM
कोरोना बीमा वापतको दाबी भुक्तानी करिब ३ अर्ब पुग्यो
Jan 24, 2021 03:36 PM